Soo dejisan Google Calendar 5.5.7.124953442 – Vessoft
AndroidXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaGoogle Calendar
Qeybta: Qoraalada iyo Jadwalka
Bogga rasmiga ah: Google Calendar
Wikipedia: Google Calendar
Google Calendar – jadwaliye la tiro balaadhan oo ah hawlaha waxtar leh. software The awood si ay u abuuraan liiska dhacdooyinka taariikhaha tilmaamay, calaamadee ay meel on map-ka iyo marti saaxiibo iyaga. Google Calendar ka dhigan liiska ka-yeela la midabada baahisey iyo iyaga go’aansan by maalmo ama toddobaadyo. software The kuu ogolaanayaa inaad inuu qaybiyo farriimaha iyo farriimaha in ka qaybgalayaasha oo dhan ee ay dhacdo. Sidoo kale Google Calendar waa inay awoodaan inay si toos ah u hesho waqti in jadwalka of user ah si ay u hirgeliyaan ujeedooyinka la xiriira in uu shaqada.
Qaybinta wargelinta in ay ka qaybgalayaasha ka mid ah ay dhacdo
Bixinta arrimaha ku
Qoondeeyey dhacdooyinka midabbo kala duwan
Isku dhex leh jadwalka kale
Soo dejisan Google Calendar
Faallo ku saabsan Google Calendar
Google Calendar Xirfadaha la xiriira